हत्या आराेप लागेका वडा अध्यक्ष घर फर्कदा अविर जात्रा – Paluwa Khabar
हत्या आराेप लागेका वडा अध्यक्ष घर फर्कदा अविर जात्रा
मंग्सिर १२, २०७७ शुक्रबार 20
विराटनगर १२ मंशिर । हत्या आरोपी विराटनगर महानगरपालिका– १४ का वडा अध्यक्ष बलदेव यादव धरौटीमा छुटेका छन् । विराटनगर– १४ कै ५५ वर्षीय समानन्द यादवको हत्या आरोपी यादव जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर भएकै दिन धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
हत्या आरोपी यादव किटानी जाहेरी परेपछि डेढ वर्षयता फरार थिए । बिहीबार जिल्ला अदालत मोरङ हाजिर भएका यादवलाई जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
आदेश्पछि यादव धरौटी बुझाएर छुटेको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिए । यादव हाजिर भएकै दिन छुट्दा उनका समर्थकले अविरजात्रा गरेका छन् ।
यादवकै घरमा बसेको थियो पञ्चायती
विवाहको विषयमा विवाद हुँदा ३२ जेठ २०७६ मा विराटनगर महानगरपालिका– १४ का वडा अध्यक्ष बलदेव यादवको घरमा बसेको पञ्चायतीमा छिमेकी ५५ वर्षीय समानन्दमाथि कुटपिट भएको थियो ।
कुटपिटबाट घाइते यादवको एक महिनापछि २६ असार २०७६ मा मृत्यु भयो । सामानन्दले जेठा छोराको विवाह गरिदिने वचन दिएका थिए । तर छोराले नमानेपछि वडा अध्यक्ष यादवको घरमा समानन्दमाथि कुटपिट भएको थियो । कुटपिटमा वडाध्यक्ष बलदेवसहित अन्य दुई वडा अध्यक्षको सहभागिता रहेको पीडित परिवारको आरोप छ ।
यादवको मृत्युपछि परिवारले घटनामा संलग्नको आरोपमा तीनजना वडा अध्यक्षसहित १० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए ।
जाहेरी परेका तीन वडाध्यक्षमध्ये २ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । घरधनीसमेत रहेका विराटनगर– १४ का अध्यक्ष बलदेव यादवलाई पूर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
गत १४ जेठमा अदालतमा उपस्थित भएका विराटनगर – १८ का वडा अध्यक्ष सञ्जय साह र २४ माघमा हाजिर भएका जहदा गाउ“पालिका– १ का वडा अध्यक्ष प्रदिपचन्द्र यादव हाजिरलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरले प्रदीपचन्द यादवलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । साहको हकमा भने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो । स्राेत अनलाईन खवर
Prevअर्काकी श्रीमती भगाएर ‘तेस्रो बिहे’ गर्ने वडाध्यक्षलाई किन कानुन लागेन ?
Nextबर्दियामा दुर्घटना न्युनिकरणका लागि ट्राफिक प्रहरिकाे सचेतना कार्यक्रम
अब फेरि एकपटक जनआन्दोलन गराई संकटकाल लगाउँछु : अध्यक्ष प्रचण्ड
ग’ र्भवती दिपिकाको पनि कोरोना सं’ क्रमणका कारण मृ’ त्यु, बचाउँन निकै प्रयास गर्दा पनि भयो असफल
मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न दिएको २४ घन्टे अल्टीमेटम सकियो, अव के होला ?
बर्दियामा माेटरसाईकल दु’र्घटनामा एककाे मृ’त्यु
८.	पतिलाई मार्न ६० हजार रुपैयाँ सुपारी (40)